नयाँ दृष्टिकोण | eBachan Nepali Christian Magazine
“मनको तितोपन मनलेनै जान्दछ, र त्यसको आनन्द कसैले पनि भोग गर्न पाउँदैन ।”
१यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु, र तिमीहरूको चाहना गर्दछु, तिमीहरू मेरा आनन्‍द र मुकुट हौ । मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्‍थिर रहो । २म इयोदिया र सुन्‍तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका होओ भनेर आग्रहपूर्वक बिन्‍ती गर्दछु । ३विश्‍वासी सहकर्मी, म तिमीलाई पनि अनुरोध गर्दछु, कि यी स्‍त्रीहरूलाई मदत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्‍लेमेससँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाउँ जीवनको पुस्‍तकमा छन्‌ । ४प्रभुमा सधैँ आनन्‍द गर । म फेरि पनि भन्‍दछु, आनन्‍द गर । ५तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्‌ । प्रभु नजिकै हुनुहुन्‍छ। ६कुनै कुरामा चिन्‍तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्‍यवादसहित तिमीहरूका बिन्‍ती परमेश्‍वरमा जाहेर होऊन्, ७र समझले नै भियाउन नसकिने परमेश्‍वरको शान्‍तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ । ८अन्‍त्‍यमा भाइ हो, जे कुरो सत्‍य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्‍यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम-योग्‍य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्‍ठता, प्रशंसाको योग्‍य केही छ भने यी नै कुराका विचार गर । ९तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्‍यौ, र ग्रहण गर्‍यौ र सुन्‍यौ र ममा देख्‍यौ, त्‍यही गर, र शान्‍तिका परमेश्‍वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ ।
टिप्पणीहरु: घनिष्ट मित्रताहरु एक बहुमुल्य उपहार हो । के तपाईसंग यस्तो साथी छ जसमा तपाई बिश्वास गर्न सक्नुहुन्छ र उसले पनि तपाईमा बिश्वास गर्नसक्छ ? एउटा यस्तो साथी जसले तपाइलाई राम्रो संग जान्दछ र तपाइको आशिषहरुमा पनि तपाइको साथी भई रहन्छ । यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने, म प्रार्थना गर्छु कि तपाईको श्रीमान वा श्रीमती पनि एक असल साथी हुनसकोस । आफ्नो जीवन-साथीलाई उत्तम मित्रको रुपमा पाउनु कतिधेरै महत्वपूर्ण छ, तर हामीसंग अरु असल मित्रहरु पनि हुनुपर्दछ । हामी समुदायमा रहनका निम्ति छौँ र यसकारण हामीले अरुहरुमा भरोसा गर्न र अरुहरुले पनि हामीमा भरोसा गर्नका निम्ति हो ।
हामी परिवारमा रहनका निम्ति बनाइएका हौँ, तर सबैभन्दा बढी हामी परमेश्वरको परिवारमा रहन र उहाँसंगको नजिक सम्बन्धमा रहनका निम्ति पनि हो । जब हामी पाप गर्छौं, उहाँलाई आफ्नो पिठु फर्काउन्छौं र उहाँ संगको सम्बन्ध बन्द गर्छौं, तर उहाँ चाहिं धैर्यता साथ हाम्रो वापसीको प्रतिक्षा गर्नुहुन्छ । यदि तपाई संग पनि त्यस्तो प्रेम गर्ने एक मित्र छ भने, तपाईले उसलाई चोट पुर्याउने कुरा भन्दा वा गर्दा पनि उसले तपाईलाई बुझ्दछ । त्यो समझदारीपनले क्षमागर्ने कुरालाई सजिलो बनाउँदछ । परमेश्वरले हामीलाई त्यसरीनै बुझ्नु भएको छ र हामीले पश्चाताप गरि उहाँमा फर्किएको उत्सुकतापुर्वक प्रतिक्षा गर्नुहुन्छ । तर अर्को पक्ष चाहिं यो होकि के तपाई अरुहरु र बिशेष गरि आफ्नो जीवन-साथीसंग त्यस्तै मित्र हुनुहुन्छ? के तपाई अरुको कमजोरीहरुलाई जान्नु र बुझ्नुहुन्छ र उनीहरुको कमजोरीहरु माथी विजयी हुन सहायता गर्नुहुन्छ? हामीले संघ संस्था वा मण्डलीमा काम गर्दाको समयमा मित्रता र सहभागितालाई बढावा दिने गर्छौ जब हामी त्यसबाट केहि प्राप्त गर्दछौं । हामी बिर्सन्छौ कि यो हाम्रो बारेमा होइन तर अरुहरुको बारेमा हो र सबैभन्दा धेरै परमेश्वरको बारेमा हो र कसरी उहाँलाई आदर र सेवा गर्नु भनेर हो । यो वास्तवमै हाम्रो बिषयमा होइन तर ख्रीष्टको बिषयमा हो । यो हामी आफुमात्र आशिषित हुने बारेमा होइन तर अरुको निम्ति आशिष बनेर ख्रीष्टलाई आदर गर्ने बिषयमा हो ।
करिब ६० बर्ष अघि, एक अमेरिकी राष्ट्रपतिले यसरी भनेका थिए “देशले तिम्रो निम्ति के गर्न सक्छ भनेर नसोध बरु तिमीले देशको निम्ति के गर्न सक्छौ भनेर सोध” । हामी इसाई भएको हुनाले “परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर होइन बरु हामीले परमेश्वरको निम्ति के गर्न सक्छौ भनेर सोधौ” । यसको मतलब परमेश्वरलाई खोजी नगरी र सहायता नमागीकन हाम्रो जीवन आफ्नै तालमा बिताऔ भन्न खोजेको होइन तर हामीले अरुहरुलाई आशिषित पार्ने बाटो पनि खोज्नु पर्छ र आफ्नो स्वार्थको निम्ति उत्प्रेरित बिनानै परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ । यदि हामीले यो कुरामा बिश्वास गर्यौ र यसलाई अभ्यास गरि त्यसलाई हाम्रो रोजाईको प्रेरणा बनायौं भने यसले हामी र हाम्रो नजिक भएकाहरुको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । हाम्रो प्रेरणा, प्रेम र कृतज्ञता सहितको हुनुपर्दछ र परमेश्वरको आराधनाको निम्ति तर अरुहरुलाई खुसी तुल्याउन वा अरुहरुले राम्रो सोच्नका निम्ति होइन । हामीले हाम्रो गवाही बिगार्छौ जब हाम्रो मनसाय आफ्नै स्वार्थपूर्ण इच्छाहरुले कलंकित हुँदछ । साँचो सेवा भनेको कुनै धन्यवादको आशा नगरिकनै र गुप्तमा अरुको निम्ति आशिष बन्नु हो । याद राखौं कि परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो विश्वासयोग्य सेवालाई पुरस्कृत गर्ने तरिका मानिसका प्रशंसा गर्ने कुरा भन्दा धेरै फरक छ ।
सत्यता चाहीं यो हो कि, हामी आफै अशिषित हुनुभनेको परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दै अरुहरुको निम्ति आशिष बन्नु हो । त्यसकारण अर्को पल्ट जब तपाईले सोच्नुहुन्छ कि “मैले पाष्टरको वचन वा बालसंगतीबाट केहि प्राप्त गरिन”, वा तपाई दया देखाउने कार्यमा अलमलिनु भयो किनकी तपाईलाई कसैले देखेनन्, यस्तो अवस्थामा रोकिनुहोस् र सोच्नुहोस्, ख्रीष्टले तपाईको छुटकाराको निम्ति कस्तो बलिदान गर्नुभएको थियो र धन्यवादी भई उहाँलाई प्रशंसा दिनुहोस्, त्यसपछि आफैमा सोध्नुहोस् “मैले अर्को व्यक्तिलाई आशिष दिनका निम्ति आराधना वा बालसङ्गतीको समयमा के गरे”? अर्कोपल्ट तपाई निरुत्साहित हुँदा वा तितोपनाले तपाईको जीवनमा पाईला टेक्दा याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरको आशिषले तपाईलाई पर्खिरहेको हुनेछ जब हामीले साधारण रुपमै पनि सेवा गर्दछौं किनकी हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र खुसी पार्न चाहन्छौं साथै आज्ञापालन गर्न पनि । आफु आशिषित हुनका निम्ति सर्वप्रथम हामी अरुको निम्ति आशिष बन्नु आवश्येक छ! याद गरौँ कि जति प्रेम परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुन्छ त्यतिनै प्रेम उहाँले हामीले प्रेम गरेकाहरुलाई गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीले प्रेम नगरेकाहरुलाई पनि उत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ । अरुहरुलाई प्रेम गर्नुभएको कारण हामीलाई कम प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने होइन र हामीलाई प्रेम गर्नु भएको कारण अरुहरुलाई कम प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन । “परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ जस्तै कि यस संसारमा हामी मात्रै छौं” – अगस्टाईन
जसरी पुनरुत्थान अझै पनि हाम्रो सम्झनामा ताजै छ त्यसरीनै यसको प्रभाव हाम्रो आत्मा र मस्तिष्कमा रहिरहनु पर्दछ । “किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई (तपाई र म साथै सबैलाई) यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌ । किनकि परमेश्‍वरले संसारलाई(तपाई र मलाई) दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस्‌ भनेर पठाउनुभयो।” यूहन्ना ३:१६-१७ । तर त्यस कुराबाट लाभान्वित हुनका निम्ति हामीले त्यो सित्तैको उपहारलाई प्राप्त गर्न आवश्यक छ । त्यहि सुसमाचार अरुहरुलाई बाड्नको निम्ति हामी बोलाइएका हौँ र त्यो सुसमाचारले हामीलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ, उत्साहित गर्नुपर्दछ र उहाँ जस्तै हुनको निम्ति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । आमेन!
Previous: नेपाली मण्डलीहरूको परिषद बोलाउनु खाँचो छ
Next: पाटनबाट भागेर संगति भेट्न गाउँ